IINGCAMANGO EZINGAMA-50 EZIPHAMBILI ZEKHITSHI ZOKUKHANYISA IIKHITSHI - UKULUNGISWA KWANGAPHAKATHI KOKUKHANYA - UYILO LWEKHAYA
Isiqithi sekhitshi ngu-kwaye akukho namnye ngokungaqhelekanga-yintoni eme phakathi komgangatho wabahambi ngeenyawo kunye neparadesi yezolimo.
Isiqithi sekhitshi sinika indawo eyoneleyo yokudala kunye nokonwabela uvuyo lokupheka, kunye nokonwabisa kunye nokonwabela inkampani yeendwendwe ezibukeleyo.
unxibe ntoni ngee jean ezimhlophe madoda
Ubunewunewu obunjalo bufanelwe kukukhanya kwe-luxe ngokulinganayo, kwaye namhlanje abathandi bokutya bokutya kunye noyilo lwangaphakathi ngokufanayo benze ezona zinto zibalaseleyo ekukhanyeni kwekhitshi, okubandakanya indalo yesiqithi sasekhitshini.
Isiqithi sasekhitshini esikhanyiswe kakuhle asiqinisekisi kuphela ukhuseleko kunye nokucaca ngelixa ulungiselela kunye nokupheka, kodwa ivumela umpheki ukuba abonise iitalente zakhe ngelixa egcina iqabane lakhe libandakanyeke ngokulinganayo. Izibane zaseSiqithini zinokuboleka ubushushu kumatheko esidlo sangokuhlwa, kunye nokuvuleka okuchwayitileyo ngexesha lesidlo sakusasa.
Ngelixa izixhobo zedome zivusa isidlo sangokuhlwa sasesitratweni, iirola ze-LED zilungele iziqithi ezinendawo ezihamba nazo zeembiza neepani. Ibhalbhu yemizi-mveliso ebekwe kakuhle iphosa umoya wefektri, ngelixa isibane se-nouveau sifumaneka kuzo zonke iinguqulelo zobugcisa- lithuba lokuguqula ikhitshi lakho libe ligalari yobuqu.
Akusiyo imfihlo ukuba ukukhanya kunokuguqula indawo ngokupheleleyo, nokuba kuyisuse kwimeko yesiqhelo okanye ukuyinyusela kwindawo eziphakamileyo ezingathethekiyo. Ikhitshi ngokungathandabuzekiyo sisiseko sekhaya, apho iinkumbulo zenziwe ngokutya okuthoba umlomo.
Indawo engcwele enjalo ifanelwe ukuphoswa kwelona khanyiso libalaseleyo, kwaye ezi 50 zingcono zokukhanyisa iziqithi zasekhitshini lithuba lakho lokufezekisa oko iinkosi zoyilo zazinazo engqondweni ngalo lonke elixesha.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziPhambili zeKhitshi
kutheni ungafanele ufumane itattoo
Uyilo lwe tattoo kwisandla samadoda
umnyama kunye nomvambo womthi ongwevu
I-dragon tattoo yaseTshayina ethangeni
Ingcuka kunye nephupha lokubamba tattoo
UJack kunye nemizobo ye tattoo sally
Iimbono ezisanda kuzalwa zetattoo kutata
I tattoo imibono yamagama abantwana